नेपाली कप्तानलाई अर्को सफलता, चर्चित क्रिकेटरलाई पछि पारे ! - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाली कप्तानलाई अर्को सफलता, चर्चित क्रिकेटरलाई पछि पारे !
काठमाडौं, कार्तिक २८ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) को टीट्वेन्टी खेलाडी वरीयताको अलराउन्डरतर्फ ४१ औं स्थानमा उक्लिएका छन्।
नेपाली खेलाडीले आईसीसीको वरीयतामा प्राप्त गरेको यो नै अहिलेसम्मको उच्च वरीयता हो। आईसीसीले हालै सार्वजनिक गरेको वरीयतामा पारस अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटका एकसेएक राम्रा खेलाडीलाई पछि पार्दै शीर्ष ५० भित्र परेका हुन्।
इङ्ल्यान्डका जोय रुट, बेन स्टोक्स, वेस्ट इन्डिजका काइरन पोलार्ड, जिम्बावेका सिकन्दर राजाजस्ता खेलाडी पारसभन्दा पछाडि परेका छन्।
याे पनि पढ्नुस सन्दीपको खेल हेर्न पारस खड्का ‘बीबीएल’ को मैदानमा
रुट ४३ औं, पोलार्ड ४६ औं, स्टोक्स ४८औं र राजा ५३ औं स्थानमा छन्। पारस टीट्वेन्टी क्रिकेटको ब्याटिङतर्फको वरीयतामा पनि समावेश छन्। उनी ब्याटिङतर्फ समावेश एक सय खेलाडीमध्ये ९३ औं स्थानमा छन्।
टीट्वेन्टी खेलाडीको ब्याटिङतर्फ नेपाली खेलाडीमा उनी मात्र परेका छन्। अलराउन्डरतर्फ भने पारससँगै सोमपाल कामीले पनि स्थान पाएका छन्।
अलराउन्डरतर्फ सोमपाल ६४औं स्थानमा छन्। उनीभन्दा पछाडि न्युजिल्यान्डका मार्क चापम्यान, दक्षिण अफ्रिकाका क्रिस मोरिस, अस्टे«लियाका मिचेल मार्सलगायतका खेलाडी छन्। सोमपाल टीट्वेन्टी क्रिकेटको बलरतर्फको वरीयतामा पनि समावेश छन्।
सोमपाल टीट्वेन्टीतर्फ बलरको वरीयतामा ९४ औं स्थानमा छन्। बलरतर्फ उनीभन्दा अगाडि नेपाली खेलाडी वसन्त रेग्मी ७५औं स्थानमा छन्। बलरतर्फ पनि नेपाली खेलाडीमा वसन्त र सोमपाल मात्र परेका छन्।
नेपाली खेलाडीले अहिलेसम्म एकदिवसीय क्रिकेटको वरीयतामा भने अवसर पाएका छैनन्। त्यसका लागि नेपाली खेलाडी अझै पनि मापदण्ड ‘क्राइटेरिया’ बाहिर छन्।
आईसीसीको नियमअनुसार एकदिवसीय क्रिकेटको खेलाडी वरीयतामा समावेश हुन नौदेखि १२ महिना एकदिवसीय मान्यता प्राप्त खेल खेलेको हुनुपर्ने प्रावधान छ।
यद्यपि नेपालले एकदिवसीय टोलीको मान्यता प्राप्त गरेको आठ महिना मात्रै भएकाले नेपाली खेलाडी वरीयता प्रणालीमा प्रवेश गर्न नपाएका हुन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट
ट्याग्स: Nepali Cricketer, Paras khadka